Sababta ay naagta u dalbato leefida hoose - shumis.net
→ Sababta ay naagta u dalbato leefida hoose
Sababta ay naagta u dalbato leefida hoose
Saan horay u soo sheegnay culimada way isku khilaafeen leefida ama jaqida alaabta haweenka, laakin culimo badan ayaa fasaxday, marka waxaa iswaydiin mudan meesha la leefayo waa halkee? hadaba naagta bahalkeeda wuxuu ka kooban yahay kintir iyo faruuryo yaryar iyo kuwa waaweyn, iyo duleelka dad badan waxay u qaateen meesha la leefayo inay tahay duleelka taas sax ma aha, ogow meesha la leefayo waa faruuraha yaryar iyo kintirka, meeshaas dhacaan ma laha, waa sida faruuraha caadiga oo kale, hadaba naagta ma ku raaxaysanaysaa leefida alaabteeda?
Haa way dhici kartaa naago badan ayaa jiro oo sidaas ku biyabaxo oo macaan badan ka helo, waxaa lagaa rabaa marka aad leefayso inaad naasaha ka tuujiso adigoo leefaya, waayo waxay isku darsanaysaa labo macaan macaanka naasaha iyo macaanka leefidda, sidoo kale lefida qabka ay tahay waa inaad carabka ku riixdo kintirkeeda.
Gariir ayay gaaraysaa, sidoo kale faraynta gabadha waa muhim, hablo badan ayaa istiinka faraha ka helo, hablo waxaa jira aad uga helo in laga leefo bahalkooda, way ku waalan yihiin, waad ogtahay cambarka marka uu kaco inuu dareen xoog badan yeelanayo oo dhacaan soo deynayo, miyirka ayaa ka tagayo gabdho badan oo raaxada jecel, waxaa kaloo jira shuun inuusan lahayn baa la rabaa siilka.
Waayo wuu kaa hor istaagayaa leefitaanka macaan, timaha ayaa ku reebayo ama meesha nadiif ma noqonayso, gabadha waa inay shuunkeeda si fiican u soo xiirtaa, ilaa meesha ay ka noqoto sida garoon kubad lagu cayaarayo oo kale, qaabab badan baa jira shaqada leefitaanka loo fuliyo.
DUMARKA:WAXEE KAHELAAN QAABKAAN IN LOO WASO WAQTIGA GALMADA DAAWO Daawo Galamada ka hor waa in sidaan loogu tuujiyaa jirkeeda dhan….
DAAWO Gabdhaha Jeego Jeego u Jiifta Xiliga La wasayo Waa Kuwa Ugu Kacsiga Badan ee Hadaynin kuwana hamoogaanin